Naya Bikalpa | समय घर्केपछि ढिलो होला है - Naya Bikalpa समय घर्केपछि ढिलो होला है - Naya Bikalpa
समय घर्केपछि ढिलो होला है
प्रकाशित मिती: २०७५ बैशाख २०, ०७: १३: ४०
१.आधुनिक समयमा महाभूकम्प गएको पनि ३वर्ष भएछ । २०७२साल बैसाख १२ गते मध्यान्ह गएको महाभूकम्पको पराकम्प जान अझै छोडेको छैन । नेपाली समाज अझै तरङ्गित छ भूकम्पको परिणामबाट । पुनर्निर्माण खासै हुन सकेको छैन । दोष कसैलाई दिनुभन्दा पनि परमुखापेक्षी भएर बस्ने बानीले हाम्रो आहतमा राहत हुन नसकेको हो ।
२.जनतासँग कर पनि लिनुपर्छ । जनतालाई आवश्यकता परेको बेलामा सहयोग पनि तत्काल गर्नुपर्छ । राज्यको यो प्रमुख दायित्व हो । कर्तव्य हो । राज्यको छहारीमा जनता बसेका हुन्छन् । जनताका दुःख र सुखलाई नै राज्यको अवस्था भनेर भनिन्छ । अहिले राज्य त छ तर आफ्ना जनताको दुःखका सहकार्य गरेर सुख र खुसी बाँड्न सकेको छैन भन्नेहरु आफ्ना ठाउँमा ठिकै छन् ।
३. राज्यले जनतालाई शर्तका खुसी बाँड्दैन । शर्तमा सहयोग गर्नुहुँदैन । महाभूकम्प गएको तीन वर्ष हुँदा पनि जनताले अझै पनि सरकारको आशा गर्नु भनेको या त हामी जनताले सरकारप्रति अत्यन्तै अपेक्षा राख्यौँ , या त सरकारले पनि जनतालाई वास्ता गर्नुभन्दा शब्दको राहत बाँड्नका लागि लागी परेको हो । बुझ्न कठिन भयो ।
४. बैसाखमा महाभूकम्प गयो अनि असारमा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा दातृ सम्मेलन भयो । झण्डै ४ खर्ब रुपैयाँ दिने बचन दिए दाताले । आयो जम्मा ६० अर्व भनिन्छ । या भनौँ सोचेको भन्दा या वचन दिएको भन्दा न्यून रकम आयो । हामीले किन आन्तरिक श्रोत परिचालन गर्न सकेनौँ ?
५.अहिले तीन वर्ष अघिको भन्दा माल सामानमा अत्यधिक भाउ बढेको छ । सरकार पीडितलाई यो भएन त्यो भएन भनेर पीडामाथि पीडा थप्दैछ । पुनर्निर्माण वास्तवमा जनताका लागि हो तर सरकार कस्का लागि हो त ? जनताको घर बन्दा नेपालको समृद्धि हुँदैन र ? जनताले खुसी पाउँदा के नेपालको सरकारलाई खुसी हुँदैन र ?
६. भन्न मनलाग्छ, भूकम्प एउटा प्राकृतिक अनिवार्य तर अदृश्य प्रक्रिया हो , सरकार त्यो भन्दा पनि अपरिपक्व र दृश्यरुपमा असंवेदशील बन्न गयो । तत्काल गरिएको सामान्य सहयोगले पनि जनताको घाउमा तत्काललाई मलम लाग्छ । तत्काल गरिने सहयोग प्राथमिक उपचार नै हुन्छ । तर कतिसम्म असंवेदनशील सरकार भयो भने एउटा सरकारले सहायताको रकम ४लाख गर्ने भन्यो भने अर्को सरकारले त्यो दिन सकिँदैन भनेर सहयोगको परिमाण बढाउने फाइल नै बन्द गरेर बस्यो । आखिर जनता कुनै पनि पार्टीका होइनन्, ती पार्टीलाई सरकारका लैजाने महान भगवान हुन् । तिन्कै आधारमा सरकारमा जाने अनि तिनैलाई अपमान गर्ने अधिकार राजनीतिक नेताहरुलाई छैन । तर नेपालमा त्यही देखिन्छ ।
७.दैवी प्रकोप जानकारी दिएर हुँदैन । त्यो सरकार वा समाज व्यवस्थापकले आगामी समस्यालाई दूरदर्शी भएर व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । त्यो क्षमता नेपाली राजनीतिज्ञ र उच्च प्रशासकहरुमा देखिएन । गाली र दोषारोपणले समस्याको समाधान हुँदैन । कुराले च्युरा भिज्दैन भनिन्छ । समस्यको गहिराईमा पुगेर समाधान गर्नका लागि समस्याग्रस्तप्रति समभाव जाग्नुपर्छ । त्यो देखिएन । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फेर्नलाई संवेदनशीलता जागरुक हुनेहरु पीडितका घाउमा मलम लगाउन पनि तँछाड मछाड गर्नुपर्नेमा स्वार्थको टकराबमा मात्र बढी खटेको पाइयो ।
८.यसैबिच बाढीले पनि क्षति पु¥यायो, पहिराले पनि क्षति पु¥यायो, खडेरीले पनि आक्रान्त पा¥यो र उब्जनीमा कमी आयो । जसरी पनि जनता पीडित भएका छन् । भूकम्पले पारेको क्षति त अपूरणीय नै छँदैछ । सरकारमा पुगेका मानिसहरुले सत्ताको स्वादमात्र गुलियो देख्नेरहेछन् । जनताको खुसीमा गुलियो स्वाद मान्नेहरुको खडेरी परेको बेलामा कसरी जनताको आहतमा राहत मिल्ला भनेर सोच्ने कसले हो ?
९. र अन्त्यमा, जे होस्, आगामी पुस मसान्तसम्मको जुन भाका सरकारले राखेको छ, त्यो बेलामा पनि भूकम्प पीडितहरुले निजी आवास बनाउन सक्ने जस्तो लाग्दैन यदि यही गतिमा सहयोगको मात्र सीमित रहने हो भने । संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरुले यसवारेमा तीनपटक सोचेर नयाँ निर्णय गरेनन् भने जनतामा आउने निराशाले एउटा नयाँ नकारात्मक गन्तव्यको खोजी गर्ने हो कि भन्ने चिता गर्न मिल्छ । आफूलाई स्थायी सरकारको रुपमा परिभाषित गरेको अहिलेको प्रचण्ड बहुमतको सरकारले बेलैमा सोचोस् । समय घर्केपछि पछुताउनु भन्दा बेलैमा सोचौँ ।
२०७५ बैशाख २०, ०७: १३: ४०